Forrest Gump ၏ 25 စာပိုဒ်တိုများ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
သင်ရုပ်ရှင်ရုံကိုကြိုက်လျှင်၊ ဖောရက်စ်ဂက်ဖ်ကိုသင်မြင်တွေ့ရသည်မှာဖြစ်နိုင်သည်ထက်ပိုသည်၊ ၎င်းကိုတစ်ချိန်ကကြည့်ရှုခဲ့သောသူသည်မည်သူမျှမပျောက်သွားသောရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်သည်။ ဤရုပ်ရှင်သည်ဖြန့်ချိပြီး ၂၅ နှစ်နီးပါးကြာခဲ့ပြီးသန်းနှင့်ချီသောကြည့်ရှုသူများ၏နှလုံးသားကိုရရှိခဲ့သည်။
၎င်းသည်သူ၏ယုံကြည်ချက်နှင့်အညီနေထိုင်ပြီးကမ္ဘာကိုပြောင်းလဲပစ်ခြင်းကိုမသိဘဲနေထိုင်ခဲ့သည့်လူတစ် ဦး ၏ပုံသဏ္tellsာန်ကိုအနည်းငယ်မျှလေ့လာသင်ယူရန်နှောင့်နှေးခဲ့သည်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုသာမကအခြားသူများကိုလည်းပါသစ္စာရှိခဲ့သည်။ သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဂျဲနီနှင့် Bubba သည်သူ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးယခင်ဗီယက်နမ်စစ်တိုက်သူဖြစ်သည်။
ဒီရုပ်ရှင်မှာမင်းရဲ့အိပ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နဲ့သင်အမှန်တကယ်လိုချင်တဲ့အရာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အရေးကြီးပုံကိုနားလည်ဖို့ကူညီပေးတဲ့အတွက်မင်းတို့ကိုစိတ်မ ၀ င်စားစေမဲ့စကားစုများစွာပါရှိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ဖော်ပြထားသောစကားစုအများစုကိုဖောရက်စ်ဂက်ဖ်ကပြောဆိုသော်လည်း Bubba နှင့် Jenny တို့၏ကိုးကားချက်များလည်းရှိသည်။
သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုပြည့်မီရန်အရေးကြီးကြောင်း Forrest Gump စကားလုံးများကဖော်ပြပေးသည်
သူကကျွန်တော့်ကိုတစ်ခါမှမပြောခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒန်ကဘုရားသခင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီလို့ငါထင်တယ်။ - ဖောရက်စ်ဂမ့်
ဖောရက်စ်သည်ကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုကယ်ဆယ်ခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အားမည်သည့်အခါကမှကျေးဇူးမတင်ခဲ့ပါ။ - ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒန်တေလာ
လူငယ်တစ် ဦး သည်အောကျမေ့သောအရာကိုရယ်စရာ။ မွေးဖွားခြင်းကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်ပထမခရစ်စမတ်အတွက်သူတို့ပေးခဲ့သောအရာကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးပျော်ပွဲစားထွက်ရန်အဘယ်အရပ်သို့သွားခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအချိုဆုံးအသံကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကျွန်တော်ကြားခဲ့ဖူးတာမှတ်မိသေးတယ်။ -Forrest Gum
မေမေကမှန်လား၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒန်ဟုတ်သလား၊ ငါတို့အားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာရှိလား၊ ငါတို့လေပြေတိုက်ခတ်သလိုမျိုးပေါ့။ သို့သော်လည်းငါသည်နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ် ဦး စလုံးတစ်ချိန်တည်းဖြစ်ပျက်နေကြသည်။ - ဖောရက်စ်ဂမ့်
အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားတူညီစေလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရင်ခွင်၌ထားလိမ့်မည်။ - ဖောရက်စ Gump ရဲ့အမေ။
ငါအရမ်းစမတ်ကျမည်မဟုတ်ပါဒါပေမယ့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါသိတယ်။ - ဖောရက်စ်ဂမ့်
ဒါဟာ King.- ဖောရက်စ Gump ဖြစ်ခဲယဉ်းဖြစ်ရပါမည်
လှည့်စားသောသူသည်အနတ္တကိုပြု၏ ။- ဖောရက်စ Gump
ကတိတစ်ခုက Forrest Gump တစ်ခုပါ
ထိုနေ့ရက်သည်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲပြေးရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါလမ်း၏အဆုံးသို့ပွေးလေ၏, ငါအဲဒီမှာရောက်တဲ့အခါငါမြို့ရဲ့အဆုံးအထိပြေးနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါအဲဒီမှာရောက်တဲ့အခါငါ Greenbow ကောင်တီသို့ပြေးနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါဒီဝေးလာလျှင်, ငါသည်အကြီးအ Alabama အဘိဓါန်ပြည်နယ်မှတဆင့်ပြေးနိုင်ကြောင်းသတိပြုမိသည် ငါသမုဒ္ဒရာကိုတည့်တည့်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့အဲဒီကိုရောက်တော့ငါဝေးသွားပြီဆိုတာသတိပြုမိလိုက်တယ်။ ငါပြန်လှည့်ပြီးဆက်ပြေးသင့်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ငါအခြားသမုဒ္ဒရာကိုရောက်တဲ့အခါငါလှည့်ပြီးဆက်ပြေးနေရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ် ငါအိပ်မောကျတဲ့အခါငါအိပ်ခဲ့တယ်။ ငါဗိုက်ဆာတဲ့အခါငါစားခဲ့တယ်။ ငါထင်ရရင်ငါသွားမယ်။ - ဖောရက်စ်ဂမ့်
ပုစွန်တွေဟာပင်လယ်ရဲ့အသီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာကင်၊ ချက်ပြုတ်၊ မုန့်ဖုတ်၊ မီးဖို၊ ထမင်း၊ ပုစွန် skewers၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ပုဇွန်ဟင်းချို၊ အမဲသား၊ အသုပ်၊ အာလူးနှင့်ပုစွန်၊ ပုစွန်ဘာဂါ၊ ပုဇွန်အသားညှပ်ပေါင်မုနှင့်နှင့်…ငါထင်တယ်။ - Benjamin Buford, Bubba
အမေပြောတာကမင်းကလူတွေအကြောင်းသူတို့ဖိနပ်စီးပြီးလူတွေအများကြီးပြောပြနိုင်တယ်။ သူတို့ဘယ်ကိုသွားနေကြတယ်၊ ဘယ်မှာလဲ ... - ဖောရက်စ Gump ။
ပုဂ္ဂလိက Gump, သင်ဒီမှာဘာတွေလုပ်နေလဲ?
- သူကပြောတယ် Gump! ဒါဟာငါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကြားဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးအဖြေပဲ။ - ဖောရက်စ Gump နှင့်တပ်ကြပ်ကြီးအကြားစကားပြောခြင်း
ကောင်းပြီငါမသိရ တစ်ခါတစ်ရံမှာမိုးရွာတာကိုရပ်တန့်သွားစေတဲ့အတွက်ကြယ်တွေထွက်လာပြီးအဲဒါကောင်းပါတယ်။ တူးမြောင်းကိုနေမဝင်ခင်လေးနဲ့တူတယ်။ ထိုရေကန်၌ရေများ၌မီးပွားပေါင်းတစ်သန်းအမြဲရှိသည်။ ဂျဲနီသည်အလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသည်၊ မိုးကောင်းကင်နှစ်ခုရှိသည်ဟုထင်ရသည်။ ပြီးတော့နေထွက်လာတဲ့အခါသဲကန္တာရမှာကောင်းကင်ဘယ်မှာပြီးဆုံးသွားပြီ၊ ကမ္ဘာမြေကြီးဘယ်ကစတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ အရမ်းလှတယ် - ဖောရက်စ်ဂမ့်
တစ်စုံတစ် ဦး ကကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးသည်ကျွန်ုပ်လက်၌ရှိသည်ဟုပြောသော်လည်းငါ ping-pong သာကစားခဲ့သည်။ - ဖောရက်စ်ဂမ့်
ဖောရက်စ်ပြေး - ဂျဲနီ Curran
သူမဘာကြောင့်ပြန်လာရတာလဲဆိုတာကျွန်မဘယ်တော့မှမသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်မဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ အရင်တုန်းကလိုပဲကျွန်မဟာလက်သည်းများနှင့်အသားများလိုပဲ၊ နေ့တိုင်းပန်းလှလှလေးတွေကိုသူ့အခန်းထဲထည့်ပြီးသူမကိုပေးခဲ့တယ် မည်သူမဆို၏အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပြီးငါ့ကိုပင်ကခုန်တတ်အောင်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ သူမနှင့်ကျွန်ုပ်သည်မိသားစုကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ - ဖောရက်စ်ဂမ့်
သငျသညျအစဉျအမွဲဒီလုပ်နေတာမရနိုင်ပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုအစဉ်မပြတ်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါကြိုးစားနေမရနိုင်ပါ။ –Jenny Curran
အဖြေသူငယ်ချင်း၊ လေထဲမျောနေသည်။ –Jenny Curran
ငါပြောခဲ့သလိုပဲပုစွန်ကပင်လယ်ရဲ့အသီးပဲ။ သင်ကသူတို့ကိုအသားကင်၊ ပြုတ်၊ ကင်ပါ၊ ဖုတ်နိုင်တယ်၊ ပုစွန်သုပ်၊ ပုဇွန်ဘာဂါနှင့်ပုဇွန်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုတော်တော်များများကပါပဲ။ –Bubba အပြာရောင်
ဂျဲနီဘာကြောင့်ပြန်လာရတာလဲဆိုတာကျွန်မဘယ်တော့မှမသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်မဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး၊ ရှေးခေတ်ကလိုပဲကျွန်မတို့လက်သည်းများနှင့်အသားများလိုနေ့တိုင်းလှပသောပန်းများကို ယူ၍ သူမ၏အခန်းထဲသို့ထည့်ပြီးသူမကိုပေးခဲ့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်သူမျှမရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ သူမကငါ့ကိုကခုန်ရန်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ကောင်းစွာ၊ သူမနှင့်ကျွန်ုပ်သည်မိသားစုကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ - ဖောရက်စ်ဂမ့်
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကံကြမ္မာရှိသလား၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုးတိမ်လိုမျိုးမတော်တဆရေပေါ်မျောနေသလားမသိ။ ဒါပေမယ့်ငါကနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တယ်၊ ဒါတွေနှစ်ခုလုံးကတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်ပျက်နိုင်တယ်။ - ဖောရက်စ်ဂမ့်
ဘဝကချောကလက်တစ်ဘူးနဲ့တူတယ်၊ မင်းကိုဘယ်သူနဲ့တို့ထိမယ်ဆိုတာမင်းမသိခဲ့ဘူး။ - ဖောရက်စ်ဂမ့်
တဖန်ငါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဥက္ကpresident္ဌတဖန်ထပ်မံ ... နောက်တဖန် ... - ဖောရက်စ Gump
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » 25 ဖောရက်စ Gump ကိုးကား